सपनामा विहे गरेको देख्नु भयो, दिन्छ यस्तो संकेत – Halkhabar kura
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १३:४१
सपनामा देखिएका कतिपय घटनाले तपाईको आगामी दिनको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने धार्मिक विश्वास रहेको छ । सपनामा देखिएका कतिपय कुरालाई ध्यान दिन सकियो भने भविष्यमा आइपर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भने आगामी दिनमा जीवनमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउन सकिने धार्मिक विश्वास रहेको छ । सपनामा देखिने कतिपय जीव जनावर, वस्तु, सामाग्रीले के अर्थ दिन्छन् त ?
गाई: पितृ दोष तथा दु:ख कष्ट आइपर्ने। दियो: दियो दान दिएको देखेमा घरवार नाश हुन्छ। देवता: देवता रिसाएको देखे धर्मको हानी हुन्छ। जमिन: जमिन हल्लिएको सपनामा देखे सरकारी मुद्दा लागेर जेल जानुपर्ने हुन्छ। नर्क: नर्कमा परेको देखे अकस्मात आपत आई नोक्सान हुन्छ।
दुध : दुध खाएको देखे शोक पर्छ। आपत पर्छ। पानी: पानी परिरहेको सपना देखे विरामी हुने संकेत हो। ढोका: ढोकामा आगो लागेको देखे घर वर्वाद, विरामी र धन नाश हुन्छ। कपास: कपासकोबोट देखे रोगको डर हुन्छ। माकुरा: माकुराले टोकेको सपना देखे रोग लग्न सक्छ। भिक्षा: सपनामा भिक्षा लिएको-दिएको दुवै अशुभ हुन्छ। गरीबीले सताउन सक्छ।
धुँवा: धन नाश, व्यपारमा हानी, मानसिक सन्ताप र प्रियजन विछोड हुन्छ , वर्षा: घनाघोर वर्षा देखे गृह कलह र मित्र विछोड हुने संकेत हो। बिरालो: सपनामा बिरालो देखिए शत्रु बढ्छ। हिलो: हिलोमा फसेको देखे कष्ट र अपव्यय हुन्छ।
तारा: तारा खसेको देखे विपत्ती आइलाग्ने सन्केत हो। फलामे वस्तु: सपनामा फलामका भाँडा वा वस्तुहरु देखिनु अशुभ हुन्छ। विपत्ती आउने सन्केत हो। फूल: रातो फूल देखे कष्ट हुन्छ। विवाह: वैवाहिक उत्सव देखिनु अशुभ मानिन्छ।
घर: घर लडेको देखे गृहस्थी जीवन तहसनहस हुन्छ. दाँत: दाँत झरेको वा भाँचिएको सपना देखे दुख र झन्झट आइलाग्छ।
भोक: आफु भोको भएको देखे विपत्ति आउँछ। आँखा: आँखा फुटेको देखे परिवारमा नोक्सानी हुने सम्भावना हुन्छ।
आकाश: आकाशमा आँधी, तुफान, धुलो देखिए देशमा लडाई वा प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ। आकाशबाट झरेको देखिए सामाजिक आपमान हुने वा समाजबाट आपहेलना वा निष्काशित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्धकार: अन्धकार वा अँध्यारो गुफा देखे रोग लाग्ने डर हुन्छ। चिता: दन्किएको चिता देख्नु अशुभ मानिन्छ।
Previous घरको ढोका अगाडी कहिल्यै नराख्नुस यी ४ चिज, रिसाउँछिन् लक्ष्मी
Next सुनको मुल्यमा वृद्धि : हेर्नुहोस कति पुग्यो !